အိန္ဒိယ သက်သေခံကတ်ပြား အတုနဲ့ မြန်မာတချို့ မဏိပူရမှာ အဖမ်းခံရ
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရပြည်နယ် မိုးရေးမြို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို တစ်အိမ်တက်ဆင်း စစ်ဆေးရှာဖွေနေပါတယ်။ ဒီလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၀ ကျော်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် သက်သေခံကတ် အတုတွေနဲ့အတူ ဖမ်းဆီးရခဲ့ပြီးနောက် ခုလိုရှာဖွေနေတာဖြစ်တယ်လို့ မဏိပူပြည်နယ်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ခန့်မှန်းပါတယ်။ ရန်ကုန်ကလာတဲ့ သတင်းကို ကိုရဲမွန် က ပြောပြပါမယ်။
ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေမတည်ငြိမ်တာကြောင့် အိန္ဒိယ- မြန်မာနယ်စပ်က မဏိပူရပြည်နယ် မိုးရေးမြို့ဘက်ကို မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ထောင်လောက် ရောက်ရှိ ခိုလှုံနေချိန်မှာ အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့က လိုက်လံ ရှာဖွေစစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဒီလို လိုက်လံစစ်ဆေးနေတဲ့အခြေအနေကို မိုးရေးမြို့မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ကူကီးအမျိုးသမီးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူ ဗွီအိုအေ ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“ အိမ်တိုင်ရာရောက်ပေါ့နော်။ စစ်ဆေးနေတာကတော့ မှန်တယ်ပေါ့နော။ သူတို့ စ စစ်တာကတော့ ဟိုးအောက်ဘက်က ပန်ဂဲလ်ပေါ့။ ပန်ဂဲလ်ဗန်လို့ ခေါ်တယ်လေ No.2ဂိတ်ဘက်ကနေ စ စစ်တာ။ စစ်တာကတော့ တောက်လျောက်ဆက် စစ်မှာတဲ့။”
ဒီလို စစ်ဆေးတာဟာ ဒီလပိုင်းအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် သက်သေခံကတ်အတု ကိုင်ဆောင်ထားသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်းလည်း သူ့အမြင်ကို အခုလို ဆက်ပြောပါတယ်။
“ ဘာကြောင့် အဲလို လုပ်လာလဲဆို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေကပေါ့နော်။ သူတို့ အိန္ဒိယ ID ကတ်တွေ အတုတွေ ကိုင်ပြီးမှ ကြွာရ်ကျန်ပူ (Churachandpur)၊ လမ်ကားဘက် သွားမယ့် အဖွဲ့တွေ အယောက် ၂၄ ယောက်ကို တခါ။ အဲဒီ ခူရင်သာဘီ ဂိတ်မှာလေနော် အဲဒီမှာ သူတို့ ဖမ်းမိတယ်။ နောက်တရက်မှာပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လူ ၅ ယောက်တခါ ပြန်ဖမ်းတယ်။ အဲဒီဟာ မတိုင်ခင်မှာလည်း ပြန်ပြီးတော့ လေဆိပ်မှာပေါ့နော် Imphal Airport မှာပေါ့နော် တခါ ID ကတ်အတုနဲ့ပေါ့လေ တခါ လေယာဉ် စီးမလို့ လုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့ အဲဒါမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့။ အဲဒီအရှိန်ကြောင့်ပေ့ါနော်။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ လူတော်တော်များများက ထင်နေကြတာပေါ့။”
လူ ၄၀ကျော် ဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အင်ဖာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ ဦးသိန်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ ဟိုနေ့က ရက္ကန်းသမား ၂၄ယောက် ၀င်လာတာပေါ့နော်။ အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ ၁၅ယောက် လေယာဉ်ကွင်းမှာ။ အဲဒါလည်း တီးတိန်နဲ့ တွန်းဇံက ကလေးတွေနေမှာ ကြွာရ်ကျန်ပူကနေ ၀င်လာတာနေမှာ။ လေယာဉ်ကွင်းမှာ မိလိုက်တော့ ယောက်ျားလေး ၁၄ယောက်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့။ သူတို့က UNHCR အစီအစဉ်နဲ့ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ လုပ်တာ။ အဲဒါလည်း မှတ်ပုံတင်ဟာမျိုး Aadhaar လို့ခေါ်တဲ့ ခုနောက်ပိုင်းခေါ်တဲ့ကတ်ဟာ အဲဒီကောင်အတုနဲ့ သူတို့ လာလိုက်တယ်။ ဟိုနေ့က ၂၄ယောက်ဟာလည်း အတုနဲ့လာတယ်။နောက်ထပ် နေပါလီ ၄ယောက်ဟာလည်း အတုနဲ့ လာတာ။ ဆေးရုံလာပြတာ။”
Aadhaar (အဒါး)လို့ခေါ်တဲ့ ကတ်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူတွေကို လက်ရှိ အစိုးရလက်ထက်မှာ ထုတ်ပေးတဲ့ သက်သေခံကတ်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ မိုးရေးမြို့မှာ စစ်ဆေးနေတာဟာ ကသည်းလက်နက်ကိုင်တွေက ဗုံးခွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်လို့ ပြောဆိုတာတွေ ရှိနေပေမဲ့ သီးခြား အတည်ပြုချက်တော့ မရပါဘူး။
အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာတွေမှာတော့ အောက်တိုဘာလ ၁ရက်နေ့က အမျိုးသမီး ၁ ယောက် အပါအ၀င် ၁၄ယောက်ကို အင်ဖာ လေယာဉ်ကွင်းမှာ၊ ၆ရက်နေ့မှာတော့ အမျိုးသမီး ၁၄ ယောက်နဲ့ ကလေး ၃ယောက် အပါအ၀င် လူ ၂၄ယောက်ကို မိုးရေးမြို့အနီး စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာနဲ့ ၈ ရက်နေ့ကတော့ အမျိုးသမီး ၃ ယောက်ပါအ၀င် ၄ ယောက်ကို စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ Aadhaar (အဒါး)ခေါ် သက်သေခံကတ်အတုနဲ့ အတူ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရနဲ့ မီဇိုရမ် စတဲ့ပြည်နယ်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ၀င်ရောက်ခိုလှုံနေတာရှိနေတာပါ။ လောလောဆည် မဏိပူရပြည်နယ်မှာတော့ ၂ထောင်နီးပါးရှိပြီး မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာတော့ ခန့်မှန်းခြေ ၁၂,၀၀၀ လောက် ခိုလှုံနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိန်ဒိယ သကျသခေံကတျပွား အတုနဲ့ မွနျမာတခြို့ မဏိပူရမှာ အဖမျးခံရ
မွနျမာနိုငျငံနဲ့ နယျနိမိတျခငျြးထိစပျနတေဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံ မဏိပူရပွညျနယျ မိုးရေးမွို့မှာ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို တဈအိမျတကျဆငျး စဈဆေးရှာဖှနေပေါတယျ။ ဒီလအတှငျး မွနျမာနိုငျငံသား ၄၀ ကြျောကို အိန်ဒိယနိုငျငံထုတျ သကျသခေံကတျ အတုတှနေဲ့အတူ ဖမျးဆီးရခဲ့ပွီးနောကျ ခုလိုရှာဖှနေတောဖွဈတယျလို့ မဏိပူပွညျနယျရောကျ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေ ခနျ့မှနျးပါတယျ။ ရနျကုနျကလာတဲ့ သတငျးကို ကိုရဲမှနျ က ပွောပွပါမယျ။
ပွညျတှငျး နိုငျငံရမေတညျငွိမျတာကွောငျ့ အိန်ဒိယ- မွနျမာနယျစပျက မဏိပူရပွညျနယျ မိုးရေးမွို့ဘကျကို မွနျမာနိုငျငံသား ၂ထောငျလောကျ ရောကျရှိ ခိုလှုံနခြေိနျမှာ အိန်ဒိယရဲတပျဖှဲ့က လိုကျလံ ရှာဖှစေဈဆေးနပေါတယျ။ ဒီလို လိုကျလံစဈဆေးနတေဲ့အခွအေနကေို မိုးရေးမွို့မှာ ရောကျရှိနတေဲ့ ကူကီးအမြိုးသမီးဆိုငျရာ လူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့က တာဝနျရှိသူ ဗှီအိုအေ ကို အခုလို ပွောပါတယျ။
“ အိမျတိုငျရာရောကျပေါ့နျော။ စဈဆေးနတောကတော့ မှနျတယျပေါ့နော။ သူတို့ စ စဈတာကတော့ ဟိုးအောကျဘကျက ပနျဂဲလျပေါ့။ ပနျဂဲလျဗနျလို့ ချေါတယျလေ No.2ဂိတျဘကျကနေ စ စဈတာ။ စဈတာကတော့ တောကျလြောကျဆကျ စဈမှာတဲ့။”
ဒီလို စဈဆေးတာဟာ ဒီလပိုငျးအတှငျး အိန်ဒိယနိုငျငံထုတျ သကျသခေံကတျအတု ကိုငျဆောငျထားသူ မွနျမာနိုငျငံသား ၄၀ ကြျော ဖမျးဆီးခံရတာနဲ့ ဆကျစပျနိုငျကွောငျးလညျး သူ့အမွငျကို အခုလို ဆကျပွောပါတယျ။
“ ဘာကွောငျ့ အဲလို လုပျလာလဲဆို ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျတှကေပေါ့နျော။ သူတို့ အိန်ဒိယ ID ကတျတှေ အတုတှေ ကိုငျပွီးမှ ကွှာရျကနျြပူ (Churachandpur)၊ လမျကားဘကျ သှားမယျ့ အဖှဲ့တှေ အယောကျ ၂၄ ယောကျကို တခါ။ အဲဒီ ခူရငျသာဘီ ဂိတျမှာလနေျော အဲဒီမှာ သူတို့ ဖမျးမိတယျ။ နောကျတရကျမှာပဲ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ လူ ၅ ယောကျတခါ ပွနျဖမျးတယျ။ အဲဒီဟာ မတိုငျခငျမှာလညျး ပွနျပွီးတော့ လဆေိပျမှာပေါ့နျော Imphal Airport မှာပေါ့နျော တခါ ID ကတျအတုနဲ့ပေါ့လေ တခါ လယောဉျ စီးမလို့ လုပျတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှပေေါ့ အဲဒါမြိုးတှတေ့ယျပေါ့။ အဲဒီအရှိနျကွောငျ့ပေ့ါနျော။ ဒီလိုမြိုးဖွဈနတေယျလို့ လူတျောတျောမြားမြားက ထငျနကွေတာပေါ့။”
လူ ၄၀ကြျော ဖမျးဆီးခံရတာနဲ့ပတျသကျလို့ အငျဖာမွို့မှာနထေိုငျတဲ့ ဦးသိနျးက အခုလို ပွောပါတယျ။
“ ဟိုနကေ့ ရက်ကနျးသမား ၂၄ယောကျ ဝငျလာတာပေါ့နျော။ အဲဒီမတိုငျခငျမှာ ၁၅ယောကျ လယောဉျကှငျးမှာ။ အဲဒါလညျး တီးတိနျနဲ့ တှနျးဇံက ကလေးတှနေမှော ကွှာရျကနျြပူကနေ ဝငျလာတာနမှော။ လယောဉျကှငျးမှာ မိလိုကျတော့ ယောကျြားလေး ၁၄ယောကျနဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့။ သူတို့က UNHCR အစီအစဉျနဲ့ နိုငျငံခွားထှကျဖို့ လုပျတာ။ အဲဒါလညျး မှတျပုံတငျဟာမြိုး Aadhaar လို့ချေါတဲ့ ခုနောကျပိုငျးချေါတဲ့ကတျဟာ အဲဒီကောငျအတုနဲ့ သူတို့ လာလိုကျတယျ။ ဟိုနကေ့ ၂၄ယောကျဟာလညျး အတုနဲ့လာတယျ။နောကျထပျ နပေါလီ ၄ယောကျဟာလညျး အတုနဲ့ လာတာ။ ဆေးရုံလာပွတာ။”
Aadhaar (အဒါး)လို့ချေါတဲ့ ကတျဟာ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ နထေိုငျသူတှကေို လကျရှိ အစိုးရလကျထကျမှာ ထုတျပေးတဲ့ သကျသခေံကတျဖွဈပါတယျ။
လကျရှိ မိုးရေးမွို့မှာ စဈဆေးနတောဟာ ကသညျးလကျနကျကိုငျတှကေ ဗုံးခှဲမယျဆိုတဲ့သတငျးကွောငျ့လို့ ပွောဆိုတာတှေ ရှိနပေမေဲ့ သီးခွား အတညျပွုခကျြတော့ မရပါဘူး။
အိန်ဒိယနိုငျငံထုတျ သတငျးစာတှမှောတော့ အောကျတိုဘာလ ၁ရကျနကေ့ အမြိုးသမီး ၁ ယောကျ အပါအဝငျ ၁၄ယောကျကို အငျဖာ လယောဉျကှငျးမှာ၊ ၆ရကျနမှေ့ာတော့ အမြိုးသမီး ၁၄ ယောကျနဲ့ ကလေး ၃ယောကျ အပါအဝငျ လူ ၂၄ယောကျကို မိုးရေးမွို့အနီး စဈဆေးရေးဂိတျမှာနဲ့ ၈ ရကျနကေ့တော့ အမြိုးသမီး ၃ ယောကျပါအဝငျ ၄ ယောကျကို စဈဆေးရေးဂိတျမှာ Aadhaar (အဒါး)ချေါ သကျသခေံကတျအတုနဲ့ အတူ ဖမျးဆီးရမိကွောငျး ဖျောပွပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ရကျနေ့ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံ မဏိပူရနဲ့ မီဇိုရမျ စတဲ့ပွညျနယျတှကေို မွနျမာနိုငျငံသားတှေ ဝငျရောကျခိုလှုံနတောရှိနတောပါ။ လောလောဆညျ မဏိပူရပွညျနယျမှာတော့ ၂ထောငျနီးပါးရှိပွီး မီဇိုရမျပွညျနယျမှာတော့ ခနျ့မှနျးခွေ ၁၂,၀၀၀ လောကျ ခိုလှုံနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
မြန်မာ CDM လှုပ်ရှားမှု ရဲဝန်ထမ်းတွေ ပိုများလာ
NLD အစိုးရလက်ထက်ချင်းဝန်ကြီးချုပ် အိန္ဒိယ မီဇိုရမ်ကို တိမ်းရှောင်ရောက်ရှိ